Sala kakuhle kunye nokuLunga okuThengisiweyo kwiNtengiso ngo-2013 | Martech Zone
Sala kakuhle kunye nokuLunga okuThengisiweyo kwiNtengiso ngo-2013
NgoLwesibini, nge-31 kaDisemba ngo-2013 NgoLwesibini, nge-31 kaDisemba ngo-2013 Douglas Karr
Ngaba lo nyaka ukufunxile? Yenzele mna. Kwakungunyaka onzima njengoko ndaswelekelwa ngutata, impilo yam yahlupheka, kwaye ishishini lalinezinto ezimbi-kubandakanya ukwahlukana nomhlobo omkhulu kunye nogxa wam. Nina bantu nifunde ibhlog yam ngolwazi lokuthengisa ngoko andifuni kugxila kweminye imiba (nangona ibinempembelelo enkulu), ndifuna ukuthetha ngqo kwiTekhnoloji yeNtengiso kunye neNtengiso.
Ukuthengisa ngo-2013 kwamunca
Sichithe unyaka wonke sibuyisela abantu emgceni ngeendlela eziqinisekisiweyo, eziyimpumelelo, nezamajelo amaninzi. Izinto ezikhazimlayo kulo nyaka zazikho kuyo yonke indawo. Abathengi bethu batshintshile imali kwaye batyale imali kubuchwephesha obuninzi kulo nyaka obuthembise lukhulu kwaye wahambisa uburharha. Isuse ukugxila kwizinto esaziyo ukuba ziya kusebenza ixesha elide kunye nokukhawuleza. Iphose imali elungileyo kunye nezixhobo kwizikim ezingakhange zivelise nantoni na. Ibiba abathengi kuthi kwaye xa bebuya, baswele imali yokuqhubeka nokusebenza.
Iziphazamiso, Ubuxoki noXinzelelo
Into etshintshileyo nam kulo nyaka njengoko bendithetha nabathengi. Ndaqala ukujonga njenge-curmudgeon egumbini kunokuba ibe yingcinga yomfo. Njengokuba besityhala amanye amathuba amatsha, ndaziva ngathi kufuneka ndihlasele kwaye ndibeke ezinye izinto ezingakumbi. Silwe njengoko abathengi bethu bengazinanzi iintsingiselo zeselfowuni, iindlela zevidiyo, kunye nempumelelo yomxholo oqhubekayo.
Uxinzelelo lwangaphakathi kwezi nkampani lwalusoyikeka… ubunkokheli bufuna iziphumo ezikhawulezayo, unciphiso lohlahlo-lwabiwo mali, kunye nokunciphisa ukubalwa kwabasebenzi. Iinkampani zanyanzelwa ukuba zithathe isigqibo esibi emva kwesigqibo esibi kwaye iinkampani zamaxhalanga ezazibabambisa zazonwabile ngakumbi ukuzityikitya, zithathe imali yazo, kwaye zibashiye bengenanto. Kwabiza abahlobo bam abaninzi abakwishishini ukushiya okanye ukugxothwa. Ndicinga ukuba isiqingatha sonxibelelwano lwam lwe-LinkedIn sinesihloko esitsha kwinkampani entsha.
Lo nyaka ngunyaka ekugxilwe kuwo. Ishishini lethu libuyele kugqaliso lwalo oluphambili ekuqinisekiseni ukuba abathengi bethu banesiseko sokuthengisa esingena ngaphakathi silandelwa ngumxholo oqinileyo, isicwangciso sentlalo kunye nesicwangciso sokukhangela esakha igunya kunye nokwazisa ngeempawu zabo. Siza kuqhubeka ukunceda abathengi bethu badibanise kwaye basebenzise iteknoloji, kodwa bagcine bangaphazamiseki. Siza kuvulelwa ukuba yintoni esebenzayo nokuba yintoni engasebenzi kulo nyaka.
Andizithandi uqikelelo ngoko ke andizukuzenza. Nantsi ingqwalaselo yethu kwi-2014 kwaye kugxilwe ekutyhaleni nabaxhasi bethu:
Ukuqinisekisa ukuba intengiso ekwi-Intanethi inesiseko esomeleleyo esilungiselelwe yona ukukhangela kunye nentlalo -Igunya lokwakha iimveliso kunye nabantu abasemva kwabo.
Ukuphunyezwa kwentengiso ngaphakathi ukulinganisa nokukhokela iindwendwe kwisitishi sokuthengisa kunye nokuguqula.
Ukugcina kunye nexabiso lokwakha kunye nethemba, ukukhokelela, kunye neendwendwe ngeentengiso ezinkulu ze-imeyile kunye neenkqubo zokuzenzekelayo.
Ukwenza imali ngo ukukhula kweselula kunye nokwamkelwa -Kubandakanya imiyalezo ebhaliweyo, iwebhu yeselfowuni, i-imeyile ephathekayo kunye nokusetyenziswa kweselfowuni.
Ukwabiwa kohlahlo-lwabiwo mali lwevidiyo, ividiyo yeengcali, ii-webinars, kunye nezinye ukubandakanya abaneshologu ezinceda ukucacisa izibonelelo ezintsonkothileyo ngokukhawuleza kunye nokuphucula ukujikeleza kunye namaxabiso.
Ukufuna amathuba okwazisa eqhuba ukwazisa kunye nokufumana iimveliso zethu, iinkonzo, abantu kunye neempawu phambi kwabaphulaphuli abatsha ezifanelekileyo.
Ndikulungele ukuba u-2013 abuyele emva kwam kwaye aqhubeke no-2014! Ungu?
tags: 20132014Igunyaemailnyaka omtshaUkubikezelaUkukhuthazwaukugcinwaSEOSocial Media Marketing
Uluhlu lwamagama okuthengisa amashishini amancinci angama-2014
Yiba yingcali yeNtengiso yezeNtlalontle